အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာတွေဝမ်းနည်းမှု, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, အမျက်ဒေါသ, စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ, ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများမှာ. စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လေးနက်သောနာမကျန်းနှင့်အတူအားလုံးဘုံလက္ခဏာတွေအားကောင်း. ပြည်သူ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဆက်လက်နိုင်ရင်. သူတို့ဟာအစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောအရာကိုမသိစေခြင်းငှါ.
Schizophrenia လေးနက်နေတဲ့စိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်. فأنه يؤثر على الطريقة التي ترى فيها العالم والطريقة التي تتصرف بها.
ويسمى أيضاً بإضطراب استخدام المواد “မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု. ” يحدث الاضطراب عندما تشرب الكثير من الكحول أو تأخذ الكثير من الادوية. استخدامك للمخدرات والكحول يضرجسمك ويؤثر على حياتك بطرق سيئة.